MaharaBSD Vagadziri Kuronga kuendesa ZFS kuZoL "ZFS paLinux" | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura iyo vagadziri vanotarisira chirongwa cheFreeBSD vakaendesa chirongwa chekushandura cheZFS faira system inoshandiswa muchirongwa chekushandisa ye "ZFS paLinux" chirongwa (ZoL), iri kuvandudza ZFS chiteshi cheLinux.
Icho chikonzero chekutama iko kumira kweZFS codebase kubva kuIllumos chirongwa (forogo yeOpenSolaris), iyo yakamboshandiswa sehwaro hwekuchinjisa zvine chekuita neZFS kuFreeBSD.
1 Nezve ZFS
1.1 ZFS kusimudzira ichaenda kuLinux
2 Nei Linux uye usingaenderere paFreeBSD?
About Wiki ZFS
ZFS iri faira system uye vhoriyamu maneja pakutanga akagadzirwa neSun Microsystems yako Solaris OS. Chirevo chepakutanga chaive 'Zettabyte Faira Sisitimu', asi ikozvino chirevo chinodzokororwa.
ZFS inomira pakukwanisa kwayo kukuru, kubatanidzwa kweyaimbova akaparadzaniswa faira system uye vhoriyamu maneja mazano mune chimwe chigadzirwa, fomati nyowani padiski, isina kuremerwa faira masystem, uye nyore nzvimbo yekuchengetedza nzvimbo.
Kusvika nguva pfupi yapfuura, Mazhinji ebudiriro ane chekuita neZFS akagadzirwa ne "ZFS paLinux" chirongwa uye kambani yeDelphix.
Iyo kambani inogadzira iyo Delphix DelphixOS inoshanda sisitimu (forogo yeIllumos) iyo yaimbopa ZFS rutsigiro muIllumos codebase.
Iko kuvandudzwa kwe ZFS ichaenda kuLinux
Mwedzi mishoma yapfuura (pakutanga kwegore), Delphix yakazivisa shanduko kune kuiswa kwe "ZFS paLinux", iyo yakazopedzisira yaunza zviitiko zvese zvine chekuita neZFS munzvimbo imwechete.
Pamapurojekiti eZFS ari kuvandudzwa uye akatsigirwa, kwasara "ZFS paLinux", iyo inogona kutarisirwa sekutanga kuitiswa kweOpenZFS.
Sezvo kuiswa kweZFS neIllumos kuri kutodzikira kumashure zvakanyanya "ZFS paLinux" maererano nekushanda.
Vagadziri veFreeBSD vaona kuti nharaunda yeFreeBSD haina kusimba zvakakwana kuti igadzire uye igadzire iyo iripo kodhi base yega.
Ukaramba uchishandisa Illumos, iro gwanza rekuita rinongowedzera uye kuchinjisa chigamba kuchazoda zviwanikwa zvakawanda.
Panzvimbo pekuyedza kunamatira neIllumos, timu yekutsigira yeZFS kuFreeBSD yakafunga kubvuma "ZFS paLinux" seyakakura chirongwa chekuvandudza ZFS, inongedzera zviwanikwa zviripo kuti zviwedzere kufambiswa kwekodhi yavo, uye shandisa yavo kodhi kodhi. iyo ZFS kuitiswa kweFreeBSD.
Tsigiro yeFreeBSD ichabatanidzwa yakanangana ne "ZFS paLinux" kodhi uye ichavandudzwa kunyanya muzvinyorwa zveprojekti iyi (nyaya yekubatanidzwa kwekubatanidzwa mune imwe repository yakatobvumiranwa naBrian Behlendorf, mutungamiri wechirongwa cheZFS paLinux).
Nei Linux uye usingaenderere paFreeBSD?
Panguva ino, prototype ye "ZFS paLinux" chiteshi cheFreeBSD yakatogadzirirwa kuti iongororwe.
Kuti uibatanidze muFreeBSD codebase, inoramba ichiwedzera zvimwe zvitsva kune iyo opencrypto fomati.
Kubatanidza chiteshi neiyo huru kodhi base "ZFS paLinux", ivo vanofanirwa kuwedzera FreeBSD rutsigiro kune inoenderera yekubatanidza system, ive shuwa kuti iyo kodhi inopasa bvunzo dzese, uye voita yekuwedzera mhando bvunzo.
Kubviswa kweZFS kuitiswa muFreeBSD kodhi yekodhi kwakarongerwa Kubvumbi 15, kana panga paine mwedzi miviri kubvira chiteshi chakadzikama (zvikasadaro nguva yekupedzisira ichachinjwa).
Mune ramangwana, kwemwedzi mitatu, zvinyorwa zvekare nezvitsva zveZFS zvichagara, mushure mezvo iyo yekare Illumos-based ZFS kodhi ichabviswa.
Ye mashandiro matsva anowanikwa muZoL port yeFreeBSD, asi kwete muIllumos ZFS kuitiswa, cherekedza multihost modhi (MMP, multi-modifier dziviriro), yepamusoro quota system, dhatabhesi encryption, yakasarudzika sarudzo ye block block makirasi. zvidzidzo).
Iko kushandiswa kwevector processor mirairidzo yekumhanyisa RAIDZ kuitisa uye kuverenga macheki, yakagadziridzwa yekuraira maturu maturu.
ZoL inogadzirisa zvakare mabhugi mazhinji ane hukama nemamiriro emamhanyiro uye akarembera, izvo zvisati zvagadziriswa muiyo Illumos kodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vagadziri veFreeBSD vanofunga kutamira ZFS kuenda kuZoL "ZFS paLinux"
Shanduko yechokwadi neFreeBSD kuenda kuZoL haizoitika munguva pfupi, nekuti kunyangwe ZoL iine huwandu hukuru hwekushanda, FreeBSD ine ZFS yakakura uye yakagadzikana kuita, kuwedzera kune zvimwe zvakanaka senge:
-Iyo yepamusoro yepamusoro TRIM rutsigiro
-VFS inoziva nezve ARC, pakati pevamwe.
Uye ivo havana chinangwa chekubaira aya nehumwe hunhu pasina.
Nekudaro, mukufamba kwenguva mativi ese anofanira kunge achihwina (kana zvakadaro ndinovimba).